A Intshayelelo emfutshane impompo - Nantong ant Machinery Co., Ltd
Lomhlaba roller Compactor
Honda olingene injini
ekhaya » News
A Intshayelelo emfutshane impompo
Time: 2017-09-14 hits:
A impompo impompo na uhlobo pump ukubana omhle apho itywina ophezulu xi zokubhala kunye izilayidi agudileyo impompo zezindlu nge mvu. Oku kwenza ukuba yahlukile iimpompo piston kwaye ivumela ukuba zisetyenziswa iingcinezelo eziphezulu. Olu hlobo pump idla elisetyenziswa ukuhambisa amdaka kamasipala kunye nezoshishino.
Bokushicilela piston kunye impompo iimpompo basebenzise mechanism igeza ukudala Buyisela motion ahambe axis, leyo ke wakha xi itankana okanye umphanda ukusebenza ukunyanzela igesi okanye ulwelo nge kwimpompo. Zamanzi yinxalenye iimpompo piston kunye iimpompo impompo ukwahlukanisa ulwelo amandla eendaba into eyenziwayo umpontshelwa. A Akunakuba ivale boxor lisetyenziselwa ukuvala i edibeneyo phakathi isitya apho eendaba idluliselwa kwaye ibhola okanye piston.
Impompo iimpompo izinto Icandelo abanyuliweyo ukuguga kunye nokudibana kunye uhlobo lwemidiya. izinto Component ziquka yobhedu, ubhedu, steel,yenziwe ngentsimbi eshayinayo, insimbi, nickel ingxubevange, okanye ezinye izinto
Okulandelayo: Ukugcina Vibrator
No.1118 Fuyuan Road,Qidong,kwiPhondo Jiangsu 226200 ,China